Ny mpanoratra - Ny Teny Foundation • Momba ny Percival Harold Waldwin
Araka ny nasongadin'i Harold W. Percival ao amin'ny sasin-tenin'ny mpanoratra ny Ny fisainana sy ny faniriana, naleony nitazona ny mpanoratra azy tany aoriana. Noho io antony io no tsy naniriany hanoratra autobiography na hanoratra tantaram-piainana iray. Tiany hijoro amin'ny fahamendrehany manokana ny asa sorany. Ny tanjony dia ny tsy hanan-kery amin'ny toetrany ny fahamarinan'ny fanambaràny, fa hosedraina arakaraka ny haben'ny fahalalany tena ao anatin'ny mpamaky tsirairay. Na eo aza izany, ny olona dia te-hahafantatra zavatra momba ny mpanoratra an-tsoratra, indrindra raha tafiditra amin'ny asa sorany izy ireo.
Noho izany dia misy zava-misy vitsivitsy momba an'i Andriamatoa Percival voalaza eto, ary misy antsipiriany bebe kokoa ao aminy Teny fampidirana an'ny mpanoratra. Harold Waldwin Percival dia teraka tany Bridgetown, Barbados tamin'ny 15 aprily 1868, tao amin'ny tanimboly an'ny ray aman-dreniny. Izy no fahatelo tamin'ny zaza efatra, ary tsy nisy tafavoaka velona taminy. Ny ray aman-dreniny, Elizabeth Ann Taylor sy James Percival dia Kristiana mpivavaka; kanefa ny ankamaroan'ny zavatra reny tamin'izy mbola kely dia toa tsy dia mitombina, ary tsy nisy valiny mahafa-po tamin'ny fanontaniany maro. Nahatsapa izy fa tsy maintsy misy ireo mahalala, ary tamin'ny fahazazany dia nanapa-kevitra fa hahita ireo "hendry" izy ary hianatra avy amin'izy ireo. Rehefa nandeha ny taona dia niova ny foto-kevitr'izy ireo momba ny "olon-kendry", fa ny tanjony hahazo fahalalana-ny tenany ihany.
Rehefa folo taona izy dia maty ny rainy ary nifindra tany Etazonia ny reniny, nanorim-ponenana tany Boston, ary tao New York City taty aoriana. Niambina ny reniny nandritra ny telo ambin'ny folo taona izy mandra-pahafatiny tamin'ny 1905. Nanjary liana tamin'ny Theosophy i Percival ary niditra tao amin'ny Theosophical Society tamin'ny 1892. Nisara-bazana io fiarahamonina io taorian'ny nahafatesan'i William Q. Judge tamin'ny 1896. Andriamatoa Percival no nandamina ny Theosophical Society Independent, izay nivory handinika ny asa soratr'i Madame Blavatsky sy ny "soratra masina" atsinanana.
Tamin'ny 1893, ary indroa indray nandritra ny efatra ambin'ny folo taona manaraka, Percival dia nanjary "nahatsiaro tena tamin'ny fahatsiarovan-tena", hoy izy fa ny lanjan'io traikefa io dia nahatonga azy hahafantatra momba ny lohahevitra rehetra tamin'ny alàlan'ny fizotry ny saina nantsoiny tena fisainana. Hoy izy: "Ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahatsiarovan-tena dia manambara ny 'tsy fantatra' amin'ilay olona nahatsiaro tena.”
Tamin'ny 1908, ary nandritra ny taona maro, Percival sy ny namany maromaro dia nanana sy niasa zaridaina tokony ho XNUMX hetsy, tanimboly, ary fitoeram-bifotsy tokony ho fito-polo kilometatra avaratry ny tanànan'i New York. Rehefa namidy ny fananana dia nitàna valopolo eo ho eo i Percival. Teo izy, akaikin'ny Highland, NY, no nonenany nandritra ny volana fahavaratra ary nanokana ny fotoanany amin'ny asa mitohy amin'ny sora-tanany.
Tamin'ny 1912 Percival dia nanomboka nanoritsoritra fitaovana ho an'ny boky iray mba hahitana ny rafitry ny fisainany feno. Satria ny vatany dia tokony hangina rehefa nieritreritra izy, dia nandidy izy isaky ny misy fanampiana. Tamin'ny 1932 ny drafitra voalohany dia vita ary nantsoina Ny lalàn'ny fisainana. Tsy nanome hevitra na nanatsoaka hevitra izy. Fa kosa, nitatitra an'izay tsapany tamin'ny alàlan'ny fisainana maharitra sy mifantoka izy. Novana ny lohateny hoe Ny fisainana sy ny faniriana, ary ny boky dia natonta tamin'ny farany tamin'ny 1946. Ary noho izany, ity sangan'asa iray-pejy ity izay manome antsipiriany lehibe momba ny olombelona sy ny fifandraisantsika amin'ny cosmos sy ny sisa dia novokarina tao anatin'ny efa-telopolo taona. Taorian'izay, tamin'ny 1951, dia namoaka izy Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy ary, tamin'ny 1952, Masonry sy ireo tandindony—Ao amin'ny fahazavan'i Ny fisainana sy ny faniriana, ary Fitondrana tena ny demokrasia.
Nanomboka tamin'ny 1904 ka hatramin'ny 1917, Percival dia namoaka gazety iray isam-bolana, Ny Teny, izany dia niely eran-tany. Mpanoratra malaza be dia be tamin'izany no nandray anjara tamin'io, ary ny olana rehetra dia nisy lahatsoratr'i Percival ihany koa. Ireo editorial ireo dia naseho isaky ny laharana 156 ary nahazoany toerana tao Iza no any Amerika? Ny Word Foundation dia nanomboka andiany faharoa an'ny The Teny tamin'ny taona 1986 ho toy ny gazety ampahefatry ny volana izay misy ho an'ny mpikambana ao aminy.
Andriamatoa Percival dia nodimandry noho ny antony voajanahary tamin'ny 6 martsa 1953 tao New York City. May ny vatany araka ny faniriany. Voalaza fa tsy misy olona afaka mihaona amin'i Percival raha tsy tsapany fa efa nihaona tamina olombelona mahatalanjona iray izy, ary azo tsapaina ny fahefany sy ny fahefany. Noho ny fahendreny rehetra, dia nijanona ho olo-malaza sy maotina izy, lehilahy tso-po tsy marina tsy mety simba, namana mafana fo sy mangoraka. Vonona foana izy hanampy amin'ny mpikaroka rehetra, fa tsy manandrana mametraka ny filozofia na iza na iza. Izy dia mpamaky mazoto amin'ny lohahevitra isan-karazany ary nanana fahalianana maro, anisan'izany ny zava-mitranga ankehitriny, ny politika, ny toekarena, ny tantara, ny sary, ny fambolena ary ny jeolojia. Ankoatry ny talentany amin'ny fanoratana, Percival dia nanana ny fahaizany matematika sy fiteny, indrindra ny Grika sy hebreo klasika; fa voalaza fa nosakanana tsy hanao na inona na inona izy, afa-tsy izay hita fa hataony eto.
Harold W. Percival ao amin'ny bokiny sy ny asa sorany hafa dia manambara ny tena fanjakana sy ny mety ho an'ny olombelona.